ဂျာမနီ - Nord Steam2ပိုက်လိုင်း၏ကုန်ကျစရိတ် - အများပိုင်သတင်းများ - အွန်လိုင်းစီးပွားရေး၊ လက်ကားနှင့် B2B စျေးကွက်သတင်း
ဂျာမနီ - Nord Steam2ပိုက်လိုင်း၏ကုန်ကျစရိတ်
ဇန်နဝါရီလ 24, 2021 ဇန်နဝါရီလ 24, 2021 Christina Kitova အာရှတိုက်, ဒီမိုကရက်ပါတီ, Donald Trump, ဥရောပ, အသားပေးသတင်းများ, ဂျာမနီ, ဂလိုဘယ် Gigs Freelancing ဂျာမနီ, ဂျာမနီလက်ကား & B2B, အရင်ဖျော်ဖြေ, ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကမ္ဘာ, သတင်းဆောင်းပါး, မြောက်အမေရိက, နိုင်ငံရေး, ရုရှားနိုင်ငံ, ရုရှားက Global Gigs Freelancing, ရုရှားလက်ကား & B2B
ပိုက်လိုင်းသည် ၉၅% ပြီးစီးသွားသည်။
Nord Stream2ပိုက်လိုင်းသည်ပြီးစီးသွားပြီဖြစ်သည်။ Svenja Schulze ၏သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်နျူကလီးယားအန္တရာယ်ကာကွယ်ရေး ၀ န်ကြီးဂျာမန်အဆိုအရစီမံကိန်းတည်ဆောက်မှုသည်ဥပဒေနှင့်စည်းမျဉ်းများအားလုံးကိုလိုက်နာခြင်းဖြင့်စတင်ခဲ့သည်။ Nord Stream2နှင့်ပတ်သက်သောဆွေးနွေးမှုသည် ၂၀၂၀၊ ဇန်နဝါရီ ၂၄ ရက်တွင်ပြုလုပ်သောအင်တာဗျူးတွင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
Svenja Schulze သည် Westphalia ရှိMünsterမှ Social Democratic Party ၏ဂျာမန်နိုင်ငံရေးသမားဖြစ်သည်။ Schulze သည်စတုတ္ထညွန့်ပေါင်းအစိုးရမှ ၀ န်ကြီးချုပ် Angela Merkel တွင်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်၊ သဘာဝထိန်းသိမ်းရေးနှင့်နျူကလီးယားဘေးကင်းရေး ၀ န်ကြီးအဖြစ်ဆောင်ရွက်သည်။
အဆိုပါအင်တာဗျူးအတွက်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည် Redaktionsnetzwerk Deutschland။ RedaktionsNetzwerk Deutschland သည်ဂျာမန် Madsack Media Group ၏ပူးတွဲကော်ပိုရေးရှင်းသတင်းခန်းမဖြစ်သည်။ ဂျာမနီ၏ဆိုရှယ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကအပြည့်အဝပိုင်ဆိုင်သည့် Deutsche Druck- und Verlagsgesellschaft ဖြစ်သည်။
ထို့အပြင်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်နျူကလီးယားအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး ၀ န်ကြီး Svenja Schulze က“ အကယ်လို့ကျွန်တော်တို့စီမံကိန်းကိုအခုရပ်တန့်လိုက်ရင်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအခြေခံမူတွေအပေါ်အခြေခံပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှုအပေါ်သံသယဖြစ်စေပြီးလုံလောက်တဲ့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုဖြစ်စေနိုင်ပြီး၊ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တရားစွဲဆိုမှုရင်ဆိုင်ရဖို့ရှိသည်လိမ့်မယ် "
ဂျာမနီသည်ကျောက်မီးသွေးနှင့်နျူကလီးယားစွမ်းအားမှီခိုမှုကိုစွန့်လွှတ်ရန်ကတိကဝတ်ပြုထားသည်။ ထို့ကြောင့်ဂျာမနီသည်အကူးအပြောင်းကာလအတွင်းသဘာဝဓာတ်ငွေ့အပေါ်မှီခိုနေရသည် - ၎င်းသည်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲရင်းမြစ်များမှစွမ်းအင်အရင်းအမြစ်များကိုအပြည့်အဝမထောက်ပံ့မီ။
ထို့အပြင်ဂျာမနီတွင်သဘာဝဓာတ်ငွေ့သိုက်မရှိ၊ တင်သွင်းရန်လည်းလိုအပ်သည်။ ဖြစ်နိုင်ခြေအလွန်နည်းပါးသောဂျာမန်လူ ဦး ရေသည်ရုရှားသို့ပြန်ရန်ရွေးချယ်ခဲ့သော Alexei Navalny နှင့်အတူစည်းလုံးညီညွတ်မှုအတွက်ရုရှားဓာတ်ငွေ့တင်သွင်းမှုကိုစွန့်လွှတ်ရန်သဘောတူလိမ့်မည်
ယခင်အမေရိကန်သမ္မတ Donald Trump ၏အမေရိကန်၏ပိတ်ဆို့မှုသည်ဂျာမနီအတွက်မငြိမ်မသက်ဖြစ်မှုကိုအာရုံစိုက်စေသည်။ နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦး သိန်းစိန် Trump ကြောင်းထောက်ပြသည် ဂျာမန်စစ်တပ်ကာကွယ်ရေးအတွက်အမေရိကန်ကငွေပေးချေ ဂျာမန်ရုရှားကနေလောင်စာဝယ်ယူနေစဉ်။ ဂျာမနီသည်ရုရှားအားတစ်နှစ်လျှင်ဒေါ်လာဘီလီယံနှင့်ချီသောစွမ်းအင်အတွက်ပေးဆောင်သည်၊ ဂျာမနီကိုရုရှားမှကာကွယ်ရန်ဖြစ်သည်။ အဲ့ဒါဘာလဲ? ကာကွယ်ရေး ၀ န်ကြီး Mark Esper ကမကြာမီတွင်အမေရိကန်သည်ဂျာမနီမှအမေရိကန်စစ်သား ၁၁,၉၀၀ ကိုဖယ်ရှားမည်ဟုပြောကြားပြီးနောက်မကြာမီတွင် Trump သည်တွစ်တာတွင်တင်ခဲ့သည်။
ယခုအချိန်အထိပိုက်လိုင်း၏ ၂.၃၀၀၀ ကီလိုမီတာ (၁၄၂၉.၁၅၄ မိုင်) ကျော်ကိုတင်ထားသည်။ ထို့ကြောင့် Nord Stream 2.3 ပိုက်လိုင်း၏ ၉၅% နီးပါးပြီးစီးပြီဖြစ်သည်။ ပိုက်လိုင်းပြီးစီးမှု၏နောက်ဆုံးအဆင့်တွင်ရှိသည်။
ထို့အပြင်၊ ဇန်နဝါရီ ၁၉ ရက်တွင်ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်က Nord Stream 19 ပိုက်လိုင်းနှင့် ပတ်သက်၍ Gazprom ၏စီမံခန့်ခွဲမှုဘုတ်အဖွဲ့ဥက္ကChairman္ဌ Alexey Miller နှင့်အွန်လိုင်းအစည်းအဝေးတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါအစည်းအဝေးတွင်ရုရှားနိုင်ငံအတွက်နိုင်ငံရေးအခြေအနေကိုဆွေးနွေးခြင်းပါဝင်သည်။
ဇန်နဝါရီလ ၂၀ ရက်တွင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ ၄၆ ကြိမ်မြောက်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကိုဖွင့်လှစ်ချိန်မှ စ၍ အန္တရာယ်များကိုအမေရိကန်မှတွေ့ရှိရသည်။ ကန့်သတ်ချက်ရှိသောပြည်နယ်များနှင့်ဆက်စပ်သည့်အသေးစားအန္တရာယ်များလည်းရှိသည် - ယူကရိန်း၊ ပိုလန်၊ ဆလိုဗက်ကီးယား၊
PJSC Gazprom စိန့်ပီတာစဘတ်ရှိသိန်းtaတာစင်တာတွင်အခြေစိုက်သောရုရှားတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအစိုးရပိုင်နိုင်ငံစုံစွမ်းအင်ကော်ပိုရေးရှင်းဖြစ်သည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင်ဒေါ်လာဘီလီယံ ၁၂၀ ရောင်းအားနှင့်အတူ၎င်းသည်ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးသဘာဝဓာတ်ငွေ့ကုမ္ပဏီနှင့်ဝင်ငွေအားဖြင့်ရုရှားတွင်အကြီးဆုံးကုမ္ပဏီအဖြစ်တည်ရှိသည်။
မကြာသေးမီက Gazprom သည် Eurobonds များကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည် The Nord Stream 2. အတွက်ရုရှားကော်ပိုရေးရှင်းသည်ရှစ်နှစ်ကာလအတွင်း ၂.၉၅% နှင့်အထွက်နှုန်း ၂.၉၅% ဖြင့်စံချိန်တင်ဒေါ်လာ ၂ ဘီလီယံယူရိုငွေကြေးကိုအောင်မြင်စွာတင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါနေရာချထားမှုအိုင်ယာလန် Euronext Dublin လဲလှယ်အပေါ်ပြုလေ၏။ Gazprom သည်အမြတ်အစွန်းများစွာရပြီးအထူးသဖြင့်သဘာဝနှင့်အရည်ပုံစံများပါ ၀ င်သောသဘာဝဓာတ်ငွေ့စျေးနှုန်းများမြင့်တက်လာခြင်းနှင့်အတူ။
ယေဘုယျအား, ရုရှားဓာတ်ငွေ့မပါဘဲ, ဂျာမန်အကူးအပြောင်းမဖြစ်နိုင်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ ရလဒ်အနေဖြင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ဂျာမန်စီးပွားရေးကိုထိခိုက်စေနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် Alexey Navalny နှင့်ယူကရိန်းတို့၏လှုံ့ဆော်သူများကိုကူညီရန်ထိုကဲ့သို့သောအခြေအနေမျိုးတွင်ရှိနေခြင်းသည်ဂျာမန်အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားများနှင့်မတူပါ။
ကြောကျမီးသှေး အများပိုင်သတင်း Donald ဂျေ Trump ဓါတျငှေ့ ဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်း ဂျာမနီ ဂျိုးဘိုင်ဒန် Nord Stream2ပိုက်လိုင်း နျူကလီးယားစွမ်းအင် နိုင်ငံရေး ရုရှားနိုင်ငံ ယူအက်စ်
ကျွန်ုပ်၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဘ ၀ အများစုကိုဘဏ္financeာရေး၊ အာမခံအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာတရားစွဲဆိုမှုများတွင်ကုန်ဆုံးခဲ့သည်။
ရုရှား - AliExpress အနာဂတ်သည်တောက်ပနေသည်